सत्तारूढ गठबन्धनबीच कुन कुन मन्त्रालयमा छ भागबन्डाको लफडा ? - bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > सत्तारूढ गठबन्धनबीच कुन कुन मन्त्रालयमा छ भागबन्डाको लफडा ?
२७ भाद्र २०७८, आईतवार ०७:१९ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको भागबन्डा अझै मिलेको छैन। भागबन्डा टुंग्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै आए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन। मन्त्रालय भागबन्डा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै एक दुईदिन लम्बिने भएको छ।
ऐतिहासिक पर्व इन्द्रजात्रा अवधिभर काठमाडौँका भित्री क्षेत्रमा सवारी निषेध २७ भाद्र २०७८, आईतवार ०७:१९
निक्षेपको ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा २७ भाद्र २०७८, आईतवार ०७:१९
सम्पादकियः विशेष आज असोज १, बाँपिझ्याला अनलाईन पत्रिका संचालनको एक बर्ष २७ भाद्र २०७८, आईतवार ०७:१९
पानी गौँथलीको ठूलो बथान भेटियो २७ भाद्र २०७८, आईतवार ०७:१९
सम्पादकियः विशेष थनु असोज ला तिथी १, बाँपिझ्याला अनलाईन पति हिल्केय दाक्षि दँ २७ भाद्र २०७८, आईतवार ०७:१९